Nhau - Diki Pixel Pitch Indoor LED Ratidza
1.High-nemazvo CNC kugadzira, zviri nyore kuwana musono splicing. Kana ikashandiswa mumusangano uri kure wevhidhiyo, chiso chemunhu wacho hachizopatsanurwe. Kana uchiratidzira WORD, EXCEL, PPT uye mamwe mafaera, hakuzove nekukanganiswa pakati pezvigadziriso uye vapatsanuri vematafura, zvichikonzera kusanzwisiswa kwezviri mukati.
Kukura kweKabineti: 600x337.5mm
Chiedza uye chitete
3. ruvara uye kupenya kweiyo yakatungamira skrini inoenderana
Modular musanganiswa unogona kuona poindi-ne-poindi kuverenga kuverenga. Mushure menguva yakareba yekushandisa, hakuzove nekusawirirana muvara uye kupenya pakati pemamojuru.
4. iyo inopenya inogadziriswa renji yakakura
Iyo diki pixel kukanda HD yakatungamira skrini inogona kazhinji kugadzirisa kupenya kwayo mune yakakura renji. Kunyangwe iri munzvimbo yakajeka kana nharaunda ine rima, iyo inotungamirwa kuratidza inogona kuratidzwa zvakajairika nekugadzirisa. Yakasangana neyepasi-kupenya uye yepamusoro-grey tekinoroji, yakakwira-tsananguro inogona zvakare kuwanikwa mukudzikira kupenya.
5. iyo inogadziriswa renji yekushisa tembiricha yakakura
Saizvozvowo, yakanaka pixel pani yakatungamirwa skrini inogona kugadzirisa tembiricha tembiricha yeiyo skrini munzvimbo yakakura Zvekushandisa zvinoda kukwirisa kwemavara, senge studio, chaiyo simulation, zvekurapa, zvemamiriro ekunze uye mamwe minda inogona kuve nechokwadi chekudzoreredzwa kwemifananidzo.
6. yakakura yekutarisa kona
HD diki pixel pani inotungamirwa maratidziro anowanzove neakakura ekuona angle angangoita 180 掳, ayo anogona kusangana nezvinodiwa zvemakamuri makuru emusangano uye horo dzemusangano dzekureba-kure uye kuona padivi.
7. musiyano wepamusoro, zororo repamusoro
Kupenya kwakaderera uye kwakakwirira grey, yakakwira zororo mwero 3840 Hz.
Inofananidzwa neyechinyakare DLP uye fungidziro, yakanaka pixel pani yakatungamirwa kuratidzwa yakatetepa uye inochengetedza nzvimbo. Muhukuru hwakaenzana, zviri nyore kutumira kupfuura LCD.
9. hupenyu hwakareba
Kazhinji ine hupenyu hwebasa hwemaawa zviuru zana nemazana mashanu, izvo zvinogona kunyatso kudzikisa mutengo wekugadzirisa.